Shir sanadeedka Haweenka Xildhibaanada Soomaaliyeed oo Muqdisho ka socda+Sawirro – Bandhiga
Shirka waxaa shalay daahfuray Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi, waxaana ka soo qeyb galay wakiilo ka socdaQaramada Midoobay iyo mas’uuliyiin kala duwan oo ka socota dowladda Soomaaliya.
Shirka oo maalintiisi labaad ka socda MagaaladaMuqdisho, waxaa maanta ka soo qeybgalay wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka Marwo Deeqa Yaasiin, sidoo kale waxaa goobjoog ka ah gudoomiyaha guddidga doorashooyinka Qaranka Soomaaliyeed Xaliimo Yareey.
Waxaa qudbad dhinacyo kala duwan taabaneysa jeedinaya haweeneyda lagu magacaabo Vera Baboun oo ah maayarkii hore ee dagmada Bathlehemee dalka Falastiin, iyadoo ka hadleysa sida haweenka uga gudbi karaancaqabadaha ka hor isaagi kara ineysan horumarin.
Shirka ayaa intiisa badan diiradda lagu saarayaaarrimaha haweenka iyo xuquuqda dumarka, iyo sida looga gudbi karo caqabadahahadda taagan, xaaladaha ay ku noolyihiin iyo doorka ay dowladda Soomaaliya kaqaadan qarto sidii haweenka qoondo fiican uga heli la haayeen siyaasadda dalka.
Waxaa shirka soo abaabulay hay’adaha Global Media iyo Ifrah Foundation.